Amagqibela kankqoyi e-Inspired 2011-Geofumadas
Iiprojekthi zokugqibela zeBhaso eliphefumlelweyo le-2011 sele zibhengeziwe, umsitho oza kuphinda uqhubeke e-Amsterdam, ukusukela nge-8 ukuya ngeye-9.
Kwimibutho engama-270 iyonke kumazwe angama-42, iiprojekthi ezingama-59 phakathi kweendidi ezingama-20 zonyuliwe. Ukuzivocavoca kunceda iBentley ukuba ipapashe iindlela zayo kwaye kwangaxeshanye iqaphele iinzame zeenkampani ezisebenzisa ubuchwepheshe bayo. Ngokukodwa, ndinomdla wokwazi indlela eza kulandelwa yiProjekthi Wise kunye neBentley Navigator, apho ndibone idemo kunyaka ophelileyo kwaye ezi ntsuku zikhuphe iinguqulelo ezikhoyo kwiVenkile ye App; owokuqala ngumphathi wamaxwebhu amaninzi kwaye owesibini ngumbonisi weemodeli ze-360 enombono wesidanga se-XNUMX hayi ngokuthe tye kodwa ngokuthe nkqo.
Amabhaso ama-4 awamkelweyo abhengeziwe nawo kwiindawo ezi-4 zokuzinza eziqaliswe okoko kwasungulwa ifomathi ephefumlelweyo. Kule meko, siyothuswa yinto yokuba kukhethwe iMexico City Cadastre, apho sinethemba lokubona umboniso okhuthazayo.
Buyela kwizinto ezintsha
ICadre Design Group, Inc. -Iprojekthi yoKhuseleko lwenyikima. -San Francisco-Oakland, California, USA)
Ukubamba uluntu lwethu
Unobhala wezeMali weSithili seFederal-Inkqubo yokuTshintshwa kweCadastre yeSixeko saseMexico. (IsiXeko saseMexico, eMexico)
Ukubamba indawo esihlala kuyo
Shinryo Corporation - IProjekthi yeShinryo Eco Renewal - (eTokyo, Japan)
I-GHD - (Melbourne, Australia)
Abokugqibela bendawo ye-Hispanic
Ngokukhetha amagama abatyunjiweyo, ubuncinci iiprojekthi ze-6 Hispanic ezithe zonyulwa njengabokugqibela eziya kutsala ingqalelo, iBrazil iyaqhubeka nokutsala umdla, ethe yaphumelela amagama atyunjiweyo e-3 Iziphakamiso ze-14 awazithwala:
Iprojekthi yokudibanisa abantu abavela kumazwekazi amabini, - (eTexas, eUSA, kunye ISantander, eSpainKwinqanaba lezixhobo zokudibanisa.
Ukuqulunqwa kwezicwangciso zeZiko loNyango - (ISão Paulo, eBrazilKuluhlu loLwakhiwo kuLwakhiwo.
Ulwandiso lweCanama Canan - (I-Panama neColon, iPanamaKwinqanaba leGeotechnics kunye nezoBunjineli bendalo.
INkqubo yeNkcazelo yeCadastral neJografi (SICyG) - (IMetepec, eMexico) KuDidi lwezinto ezintsha kunye noRhulumente.
IProjekthi yeCrystal - (IKaraã dos Carajás, iPará, eBrazil) KwiCandelo leMigodi kunye neZinyithi.
I-108 iSanta Catarina Highway - (U-Angelina kunye noMajor Gercino, eSanta Catarina, eBrazil) KuDidi lweNdlela entsha kunye neNdlela.
Amanye amagama atyunjiweyo aya kulo myalelo, i-37 ethi ngandlela thile zibonise iindawo apho izixhobo ze-Bentley zinobukho obukhulu, ngeprojekthi enye kwilizwe ngalinye:
E-United Kingdom 6
Iiprojekthi ezili-15 ezishiyekileyo lilizwe elinye.
Ulwazi olungaphezulu, njenge-ajenda, iitafile ezijikelezayo kunye nezinye iinkcukacha ziyafumaneka:
I-Microstation: Phrinta imephu kwi-Layout
Indlela yokwazi iphasiwedi yefayile yefayili
I-Microstation: imbono ayinayo umqulu